ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက်ရော၊ အလုပ်သမားတွေအတွက်ပါ ဘေးဥပဒ်မဖြစ်တဲ့ ဂျပန်စက္ကူကနေ အပ်ထိုးရုပ် ထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်။ - JAPO Japanese News
ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက်ရော၊ အလုပ်သမားတွေအတွက်ပါ ဘေးဥပဒ်မဖြစ်တဲ့ ဂျပန်စက္ကူကနေ အပ်ထိုးရုပ် ထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်။
ဂါ 12 Apr 2022, 11:57 မနက်
အပ်ထိုးရုပ်တွေဟာ အထည်ဆိုင်တိုင်းမှာ မဖြစ်မနေရှိကိုရှိနေတယ်လို့ပြောရင် ချဲ့ကားပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။
၎င်းရဲ့အများစုကိုတော့ ပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ပေမဲ့၊ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ပလတ်စတစ်လျော့ချရေးလုပ်ဆောင်လာတဲ့အထဲ ဂျပန်စက္ကူကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အပ်ထိုးရုပ်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
ဒါက ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေရုံသာက၊ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းသက်သာစေတဲ့ အကောင်းဆုံး အပ်ထိုးရုပ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီဂျပန်စက္ကူ အပ်ထိုးရုပ်ကိုဖန်တီးခဲ့တာက၊ နှစ်ပေါင်း ၈၀ ကျော်သမိုင်းရှိ အပ်ထိုးရုပ်ထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီ トーマネTomane ဖြစ်ပါတယ်။
အပ်ထိုးရုပ်တွေကိုယခင်ကတည်းက ပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပေမဲ့ အသုံးမပြုတော့ဘဲ စွန့်ပစ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ ပလတ်စတစ်တွေ အမြောက်အများထွက်လို့လာပါတယ်။
ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်းသိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဂျပန်စက္ကူကိုအသုံးပြုထားတဲ့ အပ်ထိုးရုပ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အမှိုက်ပြဿနာမှာသာမက ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဥ်မှာလည်း ဂျပန်စက္ကူနဲ့ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ပလတ်စတစ်အပ်ထိုးရုပ်ကတော့ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဥ်မှာ အော်ဂဲနစ်ပျော်ဝင်ပစ္စည်း အမြောက်အများကိုအသုံးပြုရပေမဲ့၊ ဒါကတော့မလိုအပ်ပါဘူး။
ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်း အဆိပ်သင့်ခြင်းနဲ့ ဖျားနားခြင်းဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်ကို လျော့ချပေးပါတယ်။
ဒီအပြင် ပုံမှန်အပ်ထိုးရုပ်ရဲ့အလေးချိန်ဟာ 1.6kg ရှိပေမဲ့၊ ဟောဒီဂျပန်စက္ကူထုတ်အပ်ထိုးရုပ်ကတော့ ၎င်းရဲ့ ၅ ပုံ ၁ ပုံသာ အလေးချိန်ရှိပါတယ်။
အထည်ဆိုင်တွေမှာဆို ဝတ်စုံတွေကို မကြာခဏအဝတ်လဲပေးရတဲ့အတွက် ဒီလိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိတယ်ဆို ပိုမိုလွယ်ကူနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုထားတဲ့ဂျပန်စက္ကူဟာ Ibaraki စီရင်စုထွက် 西ノ内和紙 Nishinouchi Washi အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာတော့ စက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လက်နဲ့ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ နှစ်ကြာလောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီးမှ ပထမဆုံးအဖြစ် ဖန်တီးနိုင်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးသလို၊ ဂျပန်ရဲ့ရွက်ပုန်းသီး ယဥ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံထားရပါတယ်။
ဒီဂျပန်စက္ကူထုတ်အပ်ထိုးရုပ်ဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက်၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဥ်က ဝန်ထမ်းတွေအတွက်၊ အထည်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပါမကျန် အလွန်လွယ်ကူသက်သာစေတဲ့အပြင် ဂျပန်ယဥ်ကျေးမှုကိုပါ ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီအပ်ထိုးရုပ်ဟာ ကမ္ဘာကိုသာထိုးဖောက်နိုင်ရင် Ibaraki စီရင်စုရဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။
လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကျားနှစ်အတွက် ကြီးမားတဲ့အနုပညာလက်ရာတစ်ခုကို Ibaraki ပန်းခြံတွင်တွေ့ရှိ
ဂိမ်းကို Remake ပြန်လည်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါ တစ်ပြိုင်ထဲစိတ်လှုပ်ရှားသွားစေတဲ့ FF7! ဘယ်သူကချစ်ဖို့အကောင်းဆုံးလဲ?
ဝန်ထမ်းတွေကို လေယာဉ်နဲ့အလုပ်တက်ဖို့ စီစဉ်ပေးလိုက်တဲ့ YAHOO! JAPAN
ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး PC!? SEGA မှကြေညာလိုက်သော ဂိမ်းမင်း အရမ်းမိုက်တဲ့ PC!